निषेधाज्ञाको चौथो दिन सुनसान छन् वीरगंजका सडक - Ujyaalo Nepal
By ujyaalo	 Last updated May 2, 2021 11
प्रकाश तिवारी, वीरगंज । पर्सामा निषेधाज्ञाको आज चौथो दिन बिहानैदेखि सडक टोलमा भिड हुन नदिनका लागि प्रशासन सतर्क देखिएको छ । तथापी वीरगञ्जको मुख्य सडक बाहेक गल्लीहरुमा जमघट भने कम हुन सकेको छैन ।
प्रशासनले विभिन्न माध्यमबाट आम नागरिकलाई अत्यावसक बाहेक घर बाहिन नजान र भिड नगरी आ–आफ्नो घरमा सुरक्षित रहन अनुरोध गर्दा समेत अटेरीहरुको समूहनै बाटोमा देखिएको छ । प्रहरीले बिना कारण अथवा पास नभएका सवारीसाधनहरुलाई नियन्त्रणमा लिईरहेको छ । वीरगञ्जमा सञ्चालित साना तथा मझौला उद्योगहरुमा मजदुरहरुको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ । यसकारण समेत कोरोना भाइरसको चेन ब्रेक नहुने स्पष्ट देखिन्छ ।
यता पर्सा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट १ सय ९२ जनाको स्वाबको नमुना परीक्षण गर्दा १ सय ४५ मा संक्रमण पुष्टि भएको छ । बाराका २६ जना, रौतहटका ६ जना, सर्लाहीका ३ जना र महोत्तरीका १ जनामा संक्रमण देखिएको नारायणी अस्पतालका कोभिड संयोजक डा. सरोजरोशन दासले जानकारी दिए । थपिएका संक्रमितमध्ये ३० जना महिला सहित १८ वर्षदेखि ६८ वर्ष उमेरसमुहमा संक्रमित थपिएको डा. दासले बताए । उनिहरुको सिटि भ्यालु १४.५ देखि ३४.८ सम्म रहेको छ । पर्साको बहुदरामाई, छिपहरमाई, कालिकामाई, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका र अधिकांश संक्रमितहरु वीरगञ्ज महानगरपालिकाका रहेका छन् ।
यस्तै आइतबार बिहान १ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचाररत वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १६ निवासी ६८ वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको हो । २ दिन अगाडी पिसिआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएका बृद्धलाई सोही दिन अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । गम्भिर किसिमको निमोनियासहित दीर्घ रोगिसमेत रहेको बृद्धको आइतवार बिहान १ बजे मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा २१ जना कोरोना संक्रमितलाई नारायणी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छन भने २ जनाको मृत्यु भएको छ । सोही अवधिमा ५ जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् भने १ जनालाई अन्यत्र रिफर गरिएको नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. सरोज रोशन सिंहले जानकारी दिए । हाल नारायणी अस्पतालमा ६३ जना सक्रिय संक्रमितको उपचार भइरहेको छ ।
फोटोः दीपक चौधरी
प्रकाशित: १९ बैशाख २०७८, आईतवार ०८:४०